malefaka kely no niantombohany tamin'ny herinandro, ary vetivety be dia nivoatra ilay aretina hoy ny fianakaviany. Tampoka ho azy ireo ny nandrenesana fa nodimandry ilay tovovavy, ny talata alina lasa teo. Raha ny zava-miseho ao an-toerana mantsy dia ny zokiolona no tena lasibatra amin'ny Covid-19. Mampalahelo be ny zava-misy satria zara raha nijery azy narary izahay hoy ny reniny, ary avy eo dia topi-maso fotsiny no nahitana ny razana. Nahiboka anaty vatam-paty avy hatrany ilay nofo mangatsiaka ary dia olona 10 ihany, no afaka hanatanteraka ny fandevenana.
Kohaka kely no niandohany
Raha ny fitantaran'ny renin'i Julie dia salama tsara foana ity tovovavy ity. Kohaka malefaka kely no nahazo azy tamin'ny herinandro ka nihinana sirop izay nisy tao an-trano izy. Lasa nisy rehoka anefa ilay kohoka ny faran'ny herinandro ka toy ny nisohika moramora izay Julie, dia nampiasa ody sempotra izay nisy tao an-trano mandra-piandry ny alatsinainy, hamonjena dokotera. Tany Essonne no nisy azy ireo ka mpitsabo tao an-toerana no nanatonan'izy ireo. Tao aorian'ny fizahana dia nilaza ilay mpitsabo fa halefa ho jerena any amin'ny hopitaly izy ireo, ary hampanaovina fitiliana Covid-19 rehefa tonga any. Avy hatrany dia tonga tao amin'ilay mpitsabo ny mpamonjy voina, ary tsy navela nanaraka azy ireo intsony ny reniny tamin'io fotoana io. Antso an-tariby no nahafantaran'ny reniny fa hatao "scanner" ity tovovavy ity nony tonga tany amin'ny hopitaly. Fotoana vitsy tao aorian'io, dia nantsoina indray ny renin'i Julie, ary nilazana fa halefa vonjimaika any amin'ny hopitaly iray ao Paris ity tovovavy ity, noho izy sempotra be ary hampanaovina fitiliana Covid-19 roa hafa koa izy rehefa any.
Haingana be ny fivoaran'ilay aretina
Tsy naharitra ary namonjy an-janany tany amin'ilay hopitaly tao Paris anefa ilay renim-pianakaviana tao aorian'izay ary afaka niresaka kely taminy rehefa tonga tao. Tamin'izay dia nilaza tamin'ny reniny i Julie fa misy marary azy mafy ao amin'ny fony. Nivaly kosa ireo fitiliana roa farany izay natao tao amin'ity hopitaly ity, izay nilaza fa tsy voan'ny Coronavirus i Julie. Vokatr'izay vaovao izay dia nosokafan'ireo mpitsabo ny efitrano nisy azy ary tsy nihibohana intsony izy. Nalefa nody ilay reniny tao aorian'izay. Ora vitsivitsy taorian'io anefa dia tonga kosa ilay valin'ny fitiliana natao voalohany indrindra. Ity fitiliana ity no nilaza fa voan'ny Coronavirus amin'ny endriny mahery vaika ilay tovovavy 16 taona, ary nantsoina hiverina any amin'ilay hopitaly faran'izay haingana indray ny reniny satria sempotra be indray i Julie. Ora iray tao aorian'ny nahafatesan'ity tovovavy ity anefa vao tafaverina tao amin'ny hopitaly ny reniny, izay efa ketraka tanteraka. Tamin'izay ora izay dia mbola nafanafana kely ny vatan'i Julie saingy efa mangana be sahady ny endriny, tsy misy aina intsony.
Hentitra be ny fikarakarana ny razana
Noho ny fepetra ara-pahasalamana ao Frantsa dia mijery vetivety fotsiny an'ilay razana no azon'ny fianakaviana atao raha misy matin'ny Coronavirus. Ao aorian'izay dia hidiana avy hatrany ao anaty vatam-paty tsy afa-misokatra intsony ny razana. Tsy azo entina mody koa ireo fitaovana sy kojakoja teny aminy fa dorana avokoa, ary tsy azo ampiakanjoana akory aza ny razana. Ankoatra io dia olona 10 izay tena tsy afa-miala no afaka manao ny fandevenana. Ny mpiara-mianatra sy ny fianakavian'i Julie kosa dia hanao fahatsiarovana azy, rahatrizay rehefa tapitra ny fihibohana an-trano noho ny Coronavirus. Anisan'ny firenena voa mafy tamin'ity valan'aretina maneran-tany ity tokoa mantsy i LaFrantsa. Hatramin'ny omaly dia nahatratra 1 696 ireo frantsay namoy ny ainy noho ny Covid-19. I Julie A, 16 taona kosa no zaza tsy ampy taona frantsay voalohany, namoy ny ainy noho ity aretina ity Nambaran'ny Talen'ny Fahasalamana ao Frantsa fa trangana Covid-19 mahery vaika no nahazo an'ilay tovovavy ary tena mahalana be vao miseho ny toy izany. Na izany aza, kivy sy ketraka ny fianakaviana satria sady mamoy zanaka ao anaty fotoan-tsarotra no tsy ho afa-mandevina azy ara-pomba mahazatra, ary tsy maintsy mbola hiady sy hiatrika an'ilay aretina Coronavirus izay miparitaka be ao Frantsa sy mandripaka olona maro maneran-tany amin'izao fotoana izao.